Inkolelo okanye Cha? Igama Lentsapho Yethu Yatshintshwa kwi-Ellis Island
Ukuchitha iTyth of Ellis Island Name Changes
Inani leentsapho zethu latshintshwe e-Ellis Island ...
Le nkcazo ixhaphake kakhulu malunga ne-America njengepayi ye-apula. Nangona kunjalo, kukho inyaniso encinane kula magama "utshintsho". Ngelixa amaqhina a bavela kwamanye amazwe ahlala ashintshana njengoko ahlengahlengiswa kwilizwe elitsha kunye neenkcubeko, babenqabile kakhulu xa befika e- Ellis Island .
Iinkcukacha zeenkqubo zaseMelika zokufudukela e-Ellis Island zinceda ukukhupha le nkolelo engathandabuzekiyo.
Enyanisweni, uluhlu lwabagibeli aluzange ludalwe kwi-Ellis Island - zadalwa ngumphathi wesikhephe okanye ummeli otyunjwe phambi kokuba umkhombe usuke kwichweba elivela kuyo. Ekubeni abafuduki bengenakuvunyelwa kwi-Ellis Island ngaphandle kwamaxwebhu afanelekileyo, iinkampani zokuthunyelwa ziqaphele ukuba zikhangele iphepha labangaphandle (ngokuqhelekileyo zigqitywe ngumabhalana wendawo kwilizwe lakwabo basemzini) kwaye ziqinisekise ukuba zichanekile ukuphepha ukubuyela kumfuduki ekhaya indleko yenkampani yokuthumela.
Xa umfuduki efikile e-Ellis Island, wayeza kubuzwa malunga nokuba ngubani kwaye iphepha lakhe liya kuhlolwa. Nangona kunjalo, bonke abahloli ba-Ellis Island baqhutywe phantsi kwemiyalelo engavumelekanga ukuba bayitshintshe ulwazi oluchongiweyo kunoma yimuphi umfuduki ngaphandle kokuba kucelwa ngumfuduki okanye ngaphandle kokuba uphenyo lubonise ukuba ulwazi lwangaphambili luphutha.
Abahloli bavame ukuvela kwamanye amazwe abavela kwelinye ilizwe baze bathetha iilwimi eziliqela ukuze iingxaki zonxibelelwano ziphantse zingekho. Isiqithi sase-Ellis siya kubiza ngokuba ngabaguquli bexeshana xa kunesidingo, ukukunceda ukuguqulela abantu abavela kwamanye amazwe bathetha iilwimi ezifihlakeleyo.
Oku akuthethi ukuba amagama abemi abaninzi abafudukiweyo ayengatshintshi ngexesha elithile emva kokufika kwabo eMelika.
Izigidi zabantu abavela kwamanye amazwe zaziguqulelwe ngamagama abo ngabafundisi okanye oomabhalana abangenakukwazi ukupela okanye ukubiza igama loqobo. Abaninzi abafudukayo nabo bazinikela ngokuzithandela ngamagama abo, ngokukodwa ngokusemthethweni, kwizame zokulingana kangcono kwiinkcubeko zaseMerika. Ekubeni amaxwebhu egama utshintsho ngexesha lwenkqubo ye- US yemvelo iye yafunwa kuphela ukususela ngo-1906, isizathu sokuqala sokuguqulwa kwegama labafuduki abaninzi ngaphambili belahlekile. Ezinye iintsapho zaze zagqitywa ngamagama okugqibela ahlukeneyo kuba wonke umntu wayekhululekile ukusebenzisa igama alikhethileyo. Ingxenye yabantwana bam ookhokho basePoland abafudukayo basebenzise igama elithi 'Toman' ngelixa esinye isiqingatha sisebenzisa inguqulelo engumAmerica 'uTomas' (ibali losapho kukuba igama litshintshi lucetyiswa ngabafundisikazi kwisikolo sabantwana). Iintsapho zize zivele phantsi kwamagama amaninzi ngexesha lokubalwa kwabantu. Lo ngumzekelo oqhelekileyo - Ndiqinisekile ukuba abaninzi bafumene amasebe ahlukeneyo entsapho emthini wakho usebenzisa ukuchongwa okuthethiweyo kwegama-okanye nakwiizina ezahlukeneyo.
Njengoko uqhubela phambili kunye nophando lwakho lwasemzini, khumbula ukuba xa usapho lwakho lushintsha igama eMelika, unokuqiniseka ukuba kwakukho isicelo sokhokho wakho, okanye mhlawumbi ngenxa yokungakwazi ukubhala okanye ukungazi kakuhle Ulwimi lesingesi.
Igama elinguqu kakhulu lingazange lithathwe ngabaphathi bee-immigration e-Ellis Island!
Igama lomninimandla igama kunye nemvelaphi
LEWIS - Name Name & Origin
Funda le Igama elibizwa ngokuba nguPeronymonym Name "iNyana kaRobert"
Iimpawu eziqhelekileyo zeAustralia kunye neentsingiselo zabo
RICHARD - Igama lomnqophiso kunye nentsapho
UMargaret Tudor: iNdlovukazi yaseScotland, i-Ancestor of Rulers
Hlangana noJohn Lee Uthando: Umngenisi wePencil Sharpener engcono
Izikhokelo zokuSungula isiCwangciso seSikolo esiphumeleleyo kwiinqununu
Indlela Yokwenza IWebhu Yakho YeeNcwadi Yakho Yesikebhe
Imfazwe yaseMexico kwaye ibonakalise i-Destiny
Isikhokelo soMqala kwiNkalo yoPhicothi
Lancaster naseYork Queens
I-Ford Mustang Pony Package ka-2011
Yintoni isakhiwo sesigwebo ngesiNgesi?
5 Iinkcazo Zokuhamba Ukufumana Ukutya Okusemthethweni Kwetaliyane
Lithini IBhayibhile Ngokuzila ukutya?
I-Harris-Stowe State University Admissions
Imfazwe Yehlabathi II: iBismarck
Isicwangciso seNkxaso yoKhuseleko loLuntu
Alaric kunye noBukumkani bamaGoth
Iingqungquthela ezisixhenxe zeDramatic Sophocles
I-Montclair State University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukuphindaphinda Inkcazo kwiSayensi
Yintoni ejongayo kwiHockey?
Yintoni eyenzeka njengeifomethi?